Momo Masira, Dônaty Mamy Voahendy sy Hainahandro Nepaley 5 Hafa · Global Voices teny Malagasy
Momo Masira, Dônaty Mamy Voahendy sy Hainahandro Nepaley 5 Hafa
Voadika ny 05 Marsa 2014 21:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, Ελληνικά, Italiano, English
Nepal, tanin'ny kolotsaina sy fomban-drazana marolafy, dia manana ny sakafo mampiavaka azy manokana izay mamela hitady tsiro misimisy kokoa. Ireo hainahandro atolotra etoana dia nofantenana avy amin'ireo fomba an-jatony fikarakarana sakafo mampirarak'ivy nànana ny loharanony avy any an-tampon-tendrombohitra avo ka hatrany amin'ireo lemaka ao Nepal.
1. Dônaty voahendy (Sel roti)
Ilay dônaty Nepale mikarepoka (FnM: toy ny menakely aty Madagasikara), zavatra iray tsy maintsy hita rehefa fetibe Tihar na Deepawali, dia nokarakaraina avy amin'ny kobam-bary.
Jereo ny torohain'ny NepaliMom amin'ny fahandro/fanendasana ilay dônaty (menakely):
Gundruk, sakafo malaza amin-dry zareo Nepale, dia nokarakaraina tamin'ny alàlan'ny fanotrehana sy fanamainana ravina legioma, antsoina hoe voantsinapy Nepale sy ravina ‘radis’. Ny bilaogy Nepali Local Food – Sakafo Nepale Ao An-toerana dia manazava ny fomba fahandro ny (lasopy) “gundruk ko jhol”
Gundruk ko jhol (lasopy)
ho an'olona 6 hatramin'ny 8
tongolobe 1 voatetika
Voatabia 1 voatetika
Vovon-tsakay mena 2 tsongo
Vovoka tamotamo 1/2 sotro fihinanana
Sira1 sotro fihinanana
Fanaovana azy: Atsobohy anaty rano ny Gundruk/Sinki mandritra ny 10 min. Hafanao ny menaka ary endaso ireo tongolobe sy voatabia ary sakay voatetika. Tsihifo ny Gundruk/Sinki avy nalona ary endaso, ampio vovoka tamotamo sy sira, ary asio rano 2 kaopy. Ampangotrahy 10 min, ary arosoy mafàna miaraka amin'ny vary.
Momo iray naroso miaraka amin'ny saosy mavo sy sakamalaho sy sakay mena any Nepal. Sary avy ao amin'ny Wikimedia Commons, an'i Kushal Gayal. CC BY-SA
Momo, karazana bolabolan-kanina Tibetana, dia faran'izay malaza any amin-dry zareo Nepale ka azo iheverana azy ho laharana voalohany amin'ny sakafom-pirenena. Ireo toeram-pisakafoana saika hita eny rehetra eny dia mazàna manisika hena manify ao anatiny, omby na akoho, ondry na legioma.
Topazo maso ny dingana tsirairay fahandroana momo ao amin'ny bilaogy Taste of Nepal (Tsiron'i Nepal). Na jereo ny lahatsary iray ao amin'ny YouTube nakarin'i Pucca syanu mampiseho ny fomba fahandro azy ireny:
Nanjary sakafo malaza manerana ny firenena ny Chhoila, sakafo iray ankafizin'ireo Newars any amin'ny lemak'i Kathmandu. Amn'ny ankapobeny dia namboarina avy amin'ny hena omby izy ity, ny endrika voatono amin'izy ity antsoina hoe “haku chhoila” (chhoila mainty) dia tena matsiro tokoa. Topazo maso ny bilaogy We All Nepali -Nepale daholo isika raha hitady ny antsipirihany amin'ny fomba fahandroana Chhoila hena akoho.
Jereo ny fomba fikarakarana ny chhoila ataon'ny “Babus Cooking” :
Ny Chatamari, antsoina koa hoe pizza Nepale, dia karazana krepy vita tamin'ny vary, malaza any amin-dry zareo Newars any amin'ny lemak'i Kathmandu. Omen'ny bilaogy We All Nepali amin'ny antsipirihany ny fomba fikarakarana azy io.
Jereo ny fomba fikarakarana ny chatamari ao anatin'ity lahatsary YouTube avy amin'i Marc Wiens ity :
Ny Bagiya dia sakafo mahasalama sy mafilotra vita avy amin'ny kobam-bary matsiro indrindra fa mandritry ny Fetibe Deepawali any Terai atsinanan'i Nepal. Zavatra manokana io ho an'ireo indizena Tharus. Raha toa ireo Tharus any atsinanan'i Nepal mankafy ny bagiya nofisahana miaraka amin'ny lojy, ireo Tharus any andrefan'i Nepal kosa mikarakara ny bagiya ao anaty endrika bolabola somary lavalava tsy misy lojy, hoy ny bilaogy Voice of Tharus – Feon'ny Tharus manazava.
Ianaro ato amin'ny Voice of Tharus ny fomba fikarakaràna azy :
Alona rano ny vary ary totoina anaty dheki, milina fitotoan-dry zareo vary efa hatramin'ny fahagola. Tsara lavitra ny tsiron'ny vary nototoina tao anaty dheki raha oharina amin'ny nototoina tany amin'ny milina mitotoam-bary.
Tantavano ny kobam-bary ary endaso anaty lapoaly vy (aza asiana menaka ary ataovy an-tsaina ny tsy handoro ilay koba).
Afangaroy ny rano mafàna sy ny kobam-bary ary potsiro tsara hahazoana feta malefaka.
Ahandroina amin'ny entona ny lojy ary ampiana laro, sakamalaho, voantsinapy, menaka ary sira.
Manaova bolabola avy amin'ilay feta. Lavaho eo afovoany, apetraho ao ilay fangaronà lojy, tsiro samihafa dia fisaho amin'ny felan-tànana roa ka avelao hisy hipotsaka kely ny tendrony roa.
Ahandroy amin'ny rano mangotraka eo ambony tavy vita tanimanga ireo bolabola ireo.
Aorosoy miaraka amin'ny chutney na curry sy legioma ireo bolabolanà bagiya nahandroina tamin'ny rano mangotraka ireo.
Mofo Sidhara . Sary natolotry ny mpanoratra ny bilaogy “Voice of The Tharus”
Ny Sidhara dia karakaraina avy amin'ny hoditra ‘taro’, tamotamo ary trondro maina. Somary masiatsiaka ny hanitra atao aminy ary marikivy ny tsirony, saingy mbola iray amin'ireo sakafo ankafizin'ny mponina ao Terai hatrany izy io, indrindra fa ireo indizena toy ny Tharus, Danuwars, Musahars sy ny hafa.
Omen'ny bilaogy Voice of Tharus ny antsipirihany amin'ny fomba fikarakarana ny Sidhara:
Afangaroy ny karazana trondro Dedhna sy Ponthi. Samy hita betsaka eny an-tanimbary na loharano ho an'ny daholobe eny izy roa ireo.
Hamainina amin'ny masoandro ny trondro. Mandany andro vitsy eo ny manamaina azy tsara.
Afangaroy ny tahonà Kachu (taro – Colocasia) ary teteho ho madinika kely. Sasao tsara ireo.
Kikiso na totoy ny trondro maina, miaraka amin'ny tahonà colocasia sy tamotamo, dia manaova mofo madinidinika.
Avelao ho maina amin'ny masoandro ireo mofo ireo eo amin'ny 10 na 15 andro eo ary aorian'izay dia tehirizina aminà toerana maina mba ho azo hanina amin'ny hoavy. Vonona ho azo hahandroina sy hohanina ny sidhara nataonao hatreo.
Rehefa hahandro ny sidhara, kosikoseho sy poteho ho lasa potipotiny madinika ireo mofo. Endaso ireo miaraka amin'ny tongolobe. sakay maitso, radis ary hanitra isankarazany ary avadivadika matetika. Ampio rano sy sira mba hatsiro.
Fenoy ravinà Coriandre ny lovia ary arosoy miaraka aminà fetam-bary avy eo.